Shwewiki.com – Page 1064 – News & Entertainment
အ ခ်စ္ၾကီးရင္ အမ်က္ၾကီးတယ္ဆိုတဲ့စကားက အမွန္တကယ္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းမသားေတြအတြက္ ပိုမွန္နိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႕ဆို အခ်စ္ၾကီးတဲ့မိန္္းမသားေတြဟာ သူတို႕ခ်စ္မိတဲ့သူအတြက္ ဘာမဆိုေပးဆပ္ဖို႕ဝန္မေလးသလို၊ သူတို႕အခ်စ္ကိုတန္ဖိုးမထားဘဲ နာက်င္ေအာင္လုပ္ရင္ေတာ့ လံုးဝလွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘဲေက်ာခိုင္းသြားတတ္လို႕ပါ။ အခ်စ္ၾကီးတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ….. အရံႈးေပးရတယ္လိို႕မေတြးဘူး ခ်စ္မိသြားျပီဆိုရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကေရာ ကိုယ္ခ်စ္သေလာက္ကိုယ့္ကိုခ်စ္ရဲ႕လား …
ညီ အစ်မတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် တည့်နေတဲ့အခါလည်းရှိသလို၊ ဘာမဟုတ်တာလေးအတွက် အငြင်းပွားကြ၊ စကားများရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါလည်းရှိကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် ညီမ၊အစ်မရှိခြင်းက အခုလိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ရရှိစေလို့ သင့်မှာ ညီမ၊အစ်မရှိရင် သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါ၊ ပိုပြီးချစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အရမ်းအားကိုးရတယ် ကိုယ့် မှာညီမ၊အစ်မတွေရှိတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရ၊ …
အုန်းရည် ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်…ဒါကြောင့်လည်း ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားတဲ့ အခါဖြစ်စေ ..ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်စေ အုန်းရည်ကို ဝယ်သောက်ကြသူတွေရှိပါတယ်…. ဒါပေမဲ့ အုန်းရည်ကို တစ်ပတ်တိတိနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော့ ဘယ်သူမှ မသောက်ဖူးကြဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…. တ ကယ်တော့ အုန်းရည်ကို တပတ်လုံး …
ရွှေ ဆိုတာ ရှေးယခင်ခေတ်တည်းက တန်ဖိုးထားပြီးဝတ်ဆင်သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ အရာပါ။ ဘုရင်ခေတ်ကဆို အသုံးအဆောင်တွေမှာပါ ရွှေနဲ့ချည်းပဲ သုံးခဲ့ကြတာ၊ အဝတ်အထည်တွေမှာပါ ထည့်သွင်းရက်လုပ်ကြပါတယ်။ ရွှေကို အလှအတွက်တင်မကဘဲ ဆေးကုမှုအနေနဲ့ပါ အသုံးပြုကြတယ်ဆိုတာရော သင်သိရဲ့လား။ မျက်နှာရွှေသွင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးမှာပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် …
“ဒါ နကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ မတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို …
၁။ မြွေကို ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေက ကိုယ့်ကို ကိုက်တော့မယ့်ပုံစံ၊ ပေါက်တော့မယ့် ပုံစံနဲ့ လိုက်လာလို့ ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်တယ် ဆိုရင် သင့်ထံသို့ ကံမကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခု မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ …
သင့် ကို လူချစ်လူ ခင်ပေါများစေ မယ့် အလွယ် ကူဆုံး နည်း ( မေတ္တာ ပို့နည်း)
သင့် ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း မေတ္ တာပို့နည်း သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ …
ကိုယ့် ဝင်ငွေကိုယ် ရှာပြီး ကိုယ့် အားကိုယ် ကိုး တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထား
မိန်းကလေးတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် အားနွဲ့တယ်၊ စိတ်ပျော့တယ် ဆိုပေမယ့် မှီခိုချင်တဲ့ သူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူ း။ မိသားစုက ချမ်းသာ သည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲ သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဝင်ငွေ ကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ …
“မြန်မာ အိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင်(၅)ယောက်ကြောင့် ရင် ထဲ ကခံ စားချက်တွေထိရှခဲ့ရတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”
လတ် တလောကြည့်ရှုသူများနေတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါကတော့ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ်ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းလည်း မြင့်တက်လာတာပါ။ ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာရှင်တွေပါ ဝန်းရံလာကြတာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ မနေ့ညက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “ထင်ရှားကျော်ကြားသီချင်းများ” သီဆိုမှုအပတ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်အားပေးခဲ့တာပါ။ ပြိုင်ပွဲ …
လိပ်ပြာစံအိမ်”၊ “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ”၊ “ပုဂံမြို့သူ”၊ “လေဆန်ကကြိုး”၊ “ဒဏ္ဍာရီမိုး” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဒေါင်းက အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးမင်းသားတစ်လက်ထဲ အပါအဝင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒေါင်းရဲ့ စူးရှပြီး နက်နဲတဲ့ မျက်ဝန်းညိုတွေက …
Page 1 … Page 1,063 Page 1,064 Page 1,065 … Page 1,067